image from http://www.sevenmile.com/
လို့သာရေရွတ်လိုက်မိပါတော့တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ-နာရီကြည့်တော့မနက် (၆)နာရီဘဲရှိသေးတယ်။ အိပ်ယာကနိုးပြီးဗိုက်ဆာတာနဲ့လမ်းထိပ်ကထမင်းကြော်ခေါက်ဆွဲသုတ်ဆိုင်လေးမှာ၊ ထမင်းကြော်နဲ့ဝက်ဆီပြန်လေးလွေးပြီး အေးဆေးပြန် လဘက်ရည်လေးသောက်ပြီးမှ အလုပ်စမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားတာ..အခုတော့..
ဆေးခန်းရှေ့ကထိုင်ခုံလေးတွေမှာ လူနာတွေ ၆-၇ ယောက်လောက်ရှိမယ်။ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ထိုင်စောင့်နေကြတာ..
အနားရောက်တာနဲ့- ဆရာလေး..ဆရာလေး ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ။ ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာကြာပြီ..တဲ့။ (လူဖန်သေးသေးနဲ့ဆရာ
........ရွာကပါ။ လှေကမနက်ကြီး (၂)နာရီထွက်ပြီး ဒီကို (၄) နာရီရောက်တာ၊ ရေတက်အမှီ (၈)နာရီပြန်ထွက်မှာဆရာရေ..မီပါ့မလား..တဲ့။ သြော်..စပါးစိုက်ပေးတဲ့တောင်သူလယ်သမားကျေးဇူးရှင်တွေ..သနားစရာပါလား။ တံတားလေးဘာလေးမှမထိုးပေးတော့လည်း ရှေးတုန်းကလိုဘဲ လှေသဗ္ဗာန်နဲ့ခရီးသွားရဆဲပါဘဲ။ ဦးတို့ဒေါ်ဒေါ်တို့ရေ..ဗိုက်လေးမြန်မြန်သွားဖြည့်ုလိုက်ပါရစေဦးနော်။ (၁၀)မိနစ်လောက်ဘဲ။ လှေမီအောင်လုပ်ပေးပါ့မယ်။ အစာမစားရင်အားမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ တဆိတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာလို့ တောင်းပန်ပြီး မြန်မြန်သွားစားပြီးအလုပ်စရပါတော့တယ်။
နှုတ်သာနှုတ်လိုက်ပါဆရာလေးရေ..နာတာမခံနိုင်လွန်းလို့ပါ။ လယ်ထဲလည်းမဆင်းနိုင်တော့ အလုပ်ပျက်တာကြာပြီ..တဲ့။ ကိုက်နေတဲ့သွားကိုပြရင်းအဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာပါ။ ဒေါ်ဒေါ်ရေ..ဒီသွားပိုးစားတာက အတွင်းဆုံးကအကြောထိရောက်နေပြီမို့လို့ နာလာကိုက်လာတာပါ။ ပိုးဝင်ပြီးရောင်နေတဲ့ သွားအူတိုင်က သွေးကြောလေးတွေနာတာကျဉ်တာကိုသိတဲ့အကြောလေးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး၊ (endodontic treatment-အကြောသတ်ကုတယ်လို့မြန်မာလိုအလွယ်ခေါ်ပါတယ်) အူတိုင်ကိုပြန်ပိတ်၊ သွားပြန်ဖာပြီးကုလို့ရပါသေးတယ်။ သွားကအခိုင်ကြီးရယ်..နှမျောစရာကြီး။ နှုတ်ပြီးရင်ပြန်စိုက်ရဦးမယ်။ ပြန်မစိုက်ရင် ဘေးသွားတွေကယိုင်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားက ရှည်ထွက်လာနဲ့ နောက်ထပ်သွားရောဂါတွေဆက်ရမယ်။ စိုက်တော့လည်း ငွေကကုန်ပြန်ဦးမယ်။ စိုက်သွားကလည်းတစ်သက်လုံးမခံတော့ ပြန်ပြန်အသစ်လဲပေးရဦးမယ်ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့..စဉ်းစားပါဦးလို့ ကျွန်တော်ကလေရှည်ရှည်နဲ့နားချရပြန်ပါတယ်။ ဆရာရေ..သိတဲ့အတိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက မလွယ်၊ မြို့တက်ရတာ အလုပ်တွေလည်းပစ်ထားရတာ ခဏခဏဆိုမလွယ်ဘူး။ နောက်ပြီးအကြောသတ်ကုတာက တစ်ခါတည်းနဲ့မပြီးဘူးမဟုတ်လား။ ပြန်နာမှာလည်းကြောက်တယ်။ နှုတ်သာနှုတ်ပါဆရာရယ်..တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဆက်မပြောသာတော့ပါဘူး။
image from katyendo.com/procedures.aspx
ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ သွားပိုးစားရောဂါက သွားအူတိုင်အထိရောက်သွားရင် ပထမသွားထဲကသွေးကြောလေးတွေရောင်လာပြီး၊ အရေပြားတို့၊ ကြွက်သားတို့လို အပြင်ကိုဖူးရောင်လို့လည်းမရတဲ့ အလုံပိတ်အခေါင်းဆိုတော့၊ pressure ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်ပြီး အရမ်းနာကျဉ်ကိုက်ခဲရပါတယ်။ ပိုးတွေသိပ်မပြန့်ခင်ဆိုရင်တော့ ရောင်နေတဲ့တစ်ရှူးတွေကို တစ်ခေါက်ထဲနဲ့ကုန်စင်အောင်၊ ဖယ်ရှားသန့်စင်ပြီး၊ စိတ်ချရအောင်စောင့်ကြည့်ပြီး၊ နောက်တစ်ခါမှဖာထေးတာဆက်လုပ်ရပါတယ်။ သွားအမြစ်ထိပ်အထိ ပိုးမွှားတွေရောက်ပြီးရောင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့၊ ပိုးပြောင်အရောင်ပျောက်တဲ့အထိ အခေါက်ခေါက်အခါခါဆေးလဲဆေးထည့်လုပ်ပြီးမှ၊ ဖာထေးတဲ့အဆင့်ရောက်ပါတယ်။ ချိန်းတဲ့ရက်မှာမှန်မှန်ပြန်လာပြီး ဆေးထည့်တာမလုပ်ရင် ပိုးမွှားတွေက ပြန်ပွားလာပြီး ပြန်နာပြန်ကိုက်လာတာပါဘဲ။
ဒီလိုဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့် နယ်မှာတုန်းက တစ်ရက်ကိုပျမ်းမျှသွားပေါင်း ၂၀-၃၀ လောက်နှုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းလှပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုကိုလည်းသိနေ၊ လုပ်လည်းလုပ်ပေးချင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ဘ၀ပေးအခြေအနေအရလေ။ တခါတလေချွေးဒီဒီးကျအောင် အားနဲ့နှုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ တချို့ရက်တွေဆို လက်အံတောင်သေတယ်။ ပိုးသာစားတာ၊ သွားကနဲ့နေလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ အထူးသဖြင့်အပေါ်ပထမအံသွားကြီးတွေအနှုတ်ရဆုံး၊ နှုတ်ရတာအားအကုန်ဆုံးပါဘဲ။ သွားကိုပလာယာနဲ့ညှပ်၊ တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လာအောင်ချော့ပြီးဘယ်နဲနဲညာနဲနှဲ့ရပါတယ်။ ဘယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်ကိုနည်းနည်းအားများသွားရင်၊ (၃)ချောင်းရှိတဲ့အမြစ်တွေထဲက တစ်ချောင်းချောင်း၊ တခါတလေ နှစ်ချောင်းကျိုးကျန်ခဲ့ရော..အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကျိုးကျန်ရစ်တဲ့အမြစ်တစပိုင်းကို ပြန်တူးထုတ်ရတာအခက်ဆုံးပါဘဲ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီပထမအံသွားကြီးတွေက ပိုးအစားဆုံး၊ အနှုတ်ရဆုံးပါဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်..အသက် (၆)နှစ်ကတည်းက၊ ငယ်သွားတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကနေအသစ်ပေါက်လာတဲ့ ပထမအံသွားကြီးကို မိဘတွေတော်တော်များများ သတိမပြုမိဘူး။ ငယ်သွားဘဲထင်ကြပြီး၊ ကျိုးမှာပြန်ပေါက်မှာဘဲဆိုပြီး သွားတိုက်ဖို့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲနေလာကြတာ၊ အစောဆုံးပေါက်တဲ့ကြီးသွားက အစောဆုံးပိုးစားရတာ မဆန်းပါဘူး။
သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းက Socio-economic status - လူမှုရေးစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းကလူတွေဟာ အလုပ်အကိုင်လည်းကောင်း၊ သွားကျန်းမာရေးအသိလည်းအတော်အသင့်ရှိကြတော့၊ သွားဆိုတာနှုတ်ပြီးရင်ပြန်အစားထိုးစိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပြီး၊ ပြန်စိုက်ကြတာများပါတယ်။ သွားနှုတ်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်တော့သွားလာပြန်စိုက်ရမလဲဆိုတာ အမြဲမေးပါတယ်။ သွားပြန်အစားထိုးစိုက်တာက အကုန်အကျများလို့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ အထူးသဖြင့်ပင်စင်စားအငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေကတော့ ပြန်စိုက်နိုင်ဖို့သိပ်မလွယ်ကြရှာပါဘူး။ လစာ၊ ပင်စင်ကနည်းလွန်းတယ်လေ။ ၁၉၉၈မှာကျွန်တော်အလုပ်စ၀င်တော့ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိတွေရဲ့လစာက ၁၅၇၅ကျပ်၊ လယ်စာရင်းငှားလုပ်တဲ့သူက တလကို သောင်းနဲ့ချီပြီးရပါတယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့လစာတွေ ၇၅၀၀ ကျပ်တိုးတဲ့အချိန်မှာ၊ ချောင်းလေးတွေမှာ ဘဲကျောင်းတဲ့သူက တစ်လကို ၁၅၀၀၀ကျပ်ရပါတယ်။ တနေ့လုံးကျောင်းစရာမလိုပါဘူး။ တမနက်ဘဲတဲ့။ ၀န်ထမ်းဘ၀ကတော့ ဒီလိုဒီလိုလစာကောင်းတာပါ။ လယ်သမားတွေဆိုလည်းစပါးထွက်ချိန်ဆို ဆေးခန်းမှာ တန်းစီနေကြတာပါဘဲ။ သွားပြန်စိုက်ဖို့။ အဲဒီအချိန်လောက်က စပါး (၁၀၀)ကိုရွှေတစ်ကျပ်သား၊ အံပုံတစ်ခုခေတ်လေ။ ဒီလူနာတွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ သူတို့ ကိုဆေးကုလို့ပြန်ပြီးချီးမြှင့်ကြလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ စားခဲ့သောက်ခဲ့ လှူခဲ့တန်းခဲ့ကြတာပါ။
မြို့မတက်နိုင်လို့မကုနိုင်ဘဲ ကျိတ်မှိတ်ပြီးဆေးမြီးတိုလေးနဲ့နေကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ အခမဲ့နယ်လှည့်ကုသမှုအဖွဲ့တွေနဲ့ ရွာတွေ၊ နယ်တွေကိုရောက်တဲ့အခါ၊ သွားတဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းကို လက်မလည်အောင်ကုသပေးခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းဆိုတော့ အကောင်းဆုံးကုသမှုမပေးနိုင်တာတွေလည်းရှိပေမယ့်၊ လုံးဝမကုရတာနဲ့စာတော့လည်း၊ အကျိုးရှိတယ်ဘဲပြောရမှာပေါ့။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် နယ်တွေကို အခမဲ့ဆေးကုတာတွေလုပ်ချင်သေးတယ်။ အဲဒီခရီးတွေဆိုကျွန်တော်သိပ်ပျော်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ..သူတို့တွေအားလုံးပိုင်တဲ့ မြေ၊သယံဇာတ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား၊ ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့အားလုံးကနေရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ကျောင်းတွေဆောက်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုပညာသင်ပေး၊ ၀န်ထမ်းတွေကိုလစာပေးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ တကယ်တော့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာပြည်သူပြည်သားတွေပါ။ သူတို့ကတော့ သူတို့လည်းတနည်းနည်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီသယံဇာတတွေရင်းနှီးပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုပျိုးထောင်မွေးထုတ်ခဲ့တာ၊ သူတို့အတွက်တော့၊ လျှပ်စစ်မီးလေး၊ ရွာဆေးရုံလေးတောင်ရှိုပိုင်ခွင့်၊ သုံးပိုင်ခွင့်မရှိကြတာသတိထားမိပုံမပေါ်ပါဘူး။ ကုသရေးအဖွဲ့တွေလာတယ်ဆိုရင် ပျော်ပြီး ကျေးဇူးတွေအထပ်ထပ်တင်ကြရှာပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျေးဇူးတင်ရမှာက ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါလား။
ငွေချို့တဲ့တဲ့အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း သက်သာတဲ့ကုသမှုတွေပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးကလည်းတစ်လ ၄၅၀ကျပ်လောက်ဘဲ ပင်စင်ရကြတဲ့အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေမို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဘ၀တစ်သက်တာလုံးနီးပါးကို
လာဘ်မစားတဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်မြုပ်နှံအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ကြရပြီး၊ အနားယူတဲ့အချိန်၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေများလာတဲ့အရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်က ရာဂဏန်းမျှသောပင်စင်ငွေလေးပါ။ ဒီလိုအငြိမ်းစားတွေအတွက် အစီအစဉ်လေးတွေ ပြန်ရောက်လို့ဆေးခန်းပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေ စဉ်းစားထားပါတယ်။
WHO က ၁၉၇၈တုန်းကချမှတ်လိုက်တဲ့ အားလုံးကျန်းမာသက္ကရစ်၂၀၀၀မှာ ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အရ ၂၀၀၀ခုနှစ်အရောက်မှာ လူသားအားလုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ ၂၀၀၈ရောက်တဲ့အထိလည်းမပြည့်နိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နိုင်တာက ကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဖြူးရေးပါဘဲ။ အသိရှိတော့ ရောဂါတွေကာကွယ်နိုင်မယ်။ ကုသဖို့ငွေကြေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံချို့တဲ့နေသေးတဲ့အချိန်မှာ ကာကွယ်ဖို့အသိပညာတွေရှိနေကြရင် လူတွေအားလုံးကျန်းမာသုခပြည့်ဝကြမှာပါ။
Posted by Dr. Nyan at 10:36 AM
I lost my first molar (#30) at age 18 and have bridge on #29 & #31. After 17 years, I lost most top part of tooth structure on #31 because of hole on bridge.I have root canal (15.5mm from edge to deepest)and crown lengthening. After all the cost for the treatment, my periodontist is not so sure I could have new bridge again. So what should i do, sir? Implant for #30 or bridge.
Dear Ko Wai Toe,
That is one of the disadvantages of bridge. With regular yearly dental check-up, suchabridge failure could have been discovered and replaced the failed bridge so that underlying tooth structure had not been lost. Anyway, we can only consider forabest option now. Nowadays dental implant treatment becomes the most reliable and predictable treatment option. It avoids grinding of sound tooth structures like your #29 and #31. It can stand alone without joining adjacent teeth. Long-term success rates are over 95% which is much higher than bridges. However it will cost alot. My suggestion is to haveabridge again after completion of endodontic treatment for #29. It should function for at least5years. Long-term success rates of endodontic treatment approach 80% over5years. When it fails again, just consider foradental implant.
ဒီလို ဗဟုသုတရှိတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ မျှဝေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thank you, sayar.
စိတ် ၀င်တစ်စားဖတ်သွား ပါသည် သေချာလေ့လာ ပါသည်